नायिका केकी अधिकारी चढेको गाडी ६ फिट तल खस्यो , यस्तो छ अहिले उनको स्वास्थ्य अबस्था ! – Khabar Patrika Np
नायिका केकी अधिकारी चढेको गाडी ६ फिट तल खस्यो , यस्तो छ अहिले उनको स्वास्थ्य अबस्था !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: २२:४८:१९
काठमाडौं । चर्चित नायिका केकी अधिकारी चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । काठमाडौबाट सामाजिक गीतको लागि छायाँकन गर्न गएको गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । छायाँकनको लागि हिडेको बा २० च ५४१० नम्बरको स्कोर्पियो रौतहटको कटहरिया १ स्थित बाटोबाट करिब ६ फिट तल खसेको हो ।
तिब्र गतिमा रहेको उक्त गाडी बाटोमा एक्कासि मोड आएपछि बिहान २ बजे दुर्घटनामा परेको थियो । यस विषयमा जानकारी दिदैं अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन, ‘हिजो राति २ बजे तिर हामी छायांकनको लागि रौतहट जाने क्रममा सवारी दुर्घटनामा पर्यौ तर हामी सबै सकुशल छौँ ।
यहाँहरुको मायाको लागि धेरै धन्यवाद ।’गाडीमा रहेका नेपाली फिल्म निर्देशका पुर्नेन्दु झा, नायिका अधिकारी, नेपाली मोडेल रचना शिवाकोटी ,फिल्म छायाँकार आलोक सुक्ला, कलाकार विजय यादव निर्बिज, चालक सुजन पोखरेल लगायत मध्ये केहि समान्य घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परेको गाडीमा ठुलो क्षति भएपनि छायाँकनको लागि लगिएको क्यामरा लगायतका उपकरणहरु सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।